Kedu otu Digital Asset Management si emetụta Ọdịnaya Njikwa | Martech Zone
Kedu ka Digital Asset Management si emetụta Ọdịnaya Nchịkwa
Saturday, April 4, 2015 Douglas Karr
Na ederede gara aga, anyị tụlere Ihe Digital Asset Management Bụ, Ihe mere Digital Asset Management ji dị oke mkpa na ahịa, yana Etu aga - esi kwado ihe efu nke Digital Asset Management. Na infographic a si Widen, ha na-akọwa nkọwa nke otu esi njikwa ihe onwunwe dijitalụ ga-enyere gị aka idokwa nke ọma karịa ọdịnaya management atụmatụ.
Kpọmkwem, ụlọ na nyochaa ọdịnaya gị na ebe nchekwa dị na-arụ ọrụ nke ọma karịa ịnwe ọdịnaya gbasasịa n'ofe email, sava, na ebe ndị ọzọ. Akụ gị dị mfe nyocha na ịnweta ya site n'aka onye ọ bụla ịchọrọ. Nwere ike soro ojiji na repurpose ẹdude media. Nwere ike itinye usoro maka nyocha na ihu ọma, na-agba ọsọ usoro mbipụta akwụkwọ. Imirikiti ọdịda, njikwa akụ dijitalụ na-enye ohere ụlọ ọrụ iji nweta njikwa ka ukwuu na nsụgharị ọdịnaya, ụkpụrụ nduzi, njedebe ngwongwo na mgbochi ojiji.
Na ozi ederede a, anyi n’egosiputa otu ndi ahia ahia sirila mata na ihe dijital na ihe omuma di oke nkpa. Ihe kpatara ya? Ọdịnaya ọdịnaya gosipụtara onwe ya dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị mmeri nke ndị ndu, mmata mara mma, itinye aka na ndị ahịa na ROI.
Tags: usoro nnabataohere nnwetanjikwa arịa mmụta egonchekwa egonjikwa akaraọdịnaya managementọdịnaya ọdịnayadamnjikwa ihe onwunwe dijitalụnsuso ojiji ọdịnayagbasaa
Douglas Karr Saturday, April 4, 2015
Nhazi nke Onwe Gi Nwere Ike Imebi Azụmaahịa Gị?
Nke a bụ otu ịgbakwunye ihe atụ na akụkọ gị ga-esi ree